Fampitahàna Ny Toepiainana Anaty Fonja Ao Frantsa Sy Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2016 3:21 GMT
Pikantsary avy aminà lahatsary fanadihadiana momba ny fonja ao Madagasikara sy ny mety hitrangàn'ny pesta
Miovaova be samy manana ny azy ny toepiainana any am-ponja manerana izao tontolo izao. Hifantoka aminà firenena roa isika ary hanao fampitahàna ny zavamisy ao Madagasikara sy Frantsa. Marobe ireo bilaogy sy media sosialy milaza momba ny fomba fitànana amponja ao amin'ireo firenena roa ireo. Vakian'izy ireny bantsilana ny politika momba ny heloka bevava sy ny famaizana, ary ny vokatr'izany eny an-kianja. Omen'ireny tranonkala ireny fitenenana ireo vavolombelon'ny fiainana andavanandron'ny fonja : ireo mpigadra sy ny havany tonga mifampiresaka eo amin'ny toerana natao ho amin'izany, ireo matianina sy sy mpisehatra amin'ny fitànana am-ponja.
Mazava loatra fa tena samihafa be ny fomba fitànana am-ponja any amin'ireo firenena roa ireo, nefa ahitàna lohahevitra maromaro iraisana. Ao Madagasikara, maro ireo tranonkala manome topimaso momba ny fiainana any anatin'ny fomja malagasy. Iray amin'ireo mpanao gazety tsy miankina nanao fanadihadiana lavabe momba ny fiainan'ireo malagasy voafonja ao Antananarivo i Virginie de Galzain, tamin'ny 2005 hatramin'ny 2012. Toy izao no nosoratany momba izany :
Toerana izay mazàna no efa hatramin'ny andron'ny fanjanahantany, ivangongoan'olona maro, fofon'ampy toy ny hanakenda anao ary mamonto anao vantany vao manitsaka fotsiny ny tokonan'ny efitrano ‘fandriana’, ny loza mitatao mety hiverimberenan'ny pesta noho ny fisian'ireo voalavo marobe (lahatsary etsy ambany) sy ny parasy, taham-pahafatesana betsaka ateraky ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fikarakaràna, zon'olombelona tsy voahaja…. Izany no teodraharaha tsy hay zakaina any anaty fonja ao Madagasikara
Virginie manampy hoe :
Feno loatra ny fonja. Ambony karazana-dàbilio lavalava vita tamin'ny hazo fisaka mifanaingintaingina no matory ireo voafonja, hazo tsy voatambatra tsara fohy lavitra noho ny an'ny olona matory eo amboniny ny halavany, tsy ahafahana mitsotra akory. Ambonin'izany dia mbola eo ihany koa no ametrahan'izy ireo izay entan-keliny azy manokana. Mifanosonkosona eo daholo, matetika izy ireo no tsy maintsy mifandimby matory noho ny tsy fisian'ny toerana ho an'ny rehetra. Mirefy 35 metatra ny halavany ary metatrra vitsivitsy ny sakany ny iray amin'ireo ‘efitrano’ ao amin'ity fonja ity. Mpigadra miisa 229 no hidiana ao manomboka amin'ny 5 ora hariva hatramin'ny 6/7 ora maraina.
Pikantsary tamin'ny lahatsarin'ny “Médecins du Monde” momba ireo fonja ao Madagasikara, tao amin'ny Youtube
Tsy vao omaly ny fatoritoriana tsy miraharaha ny fikarakaràna ny fonja sy ny fampifanarahana ny rafi-pitsaràna ao aminy. Iray amin'ireo toeram-pamonjàna isan'ny malaza ratsy ny ao Nosy Lava. Natao ho an'ireo mpanao politika sy mpanao heloka bevava efa mpamerin-keloka io fonja io. Niaraka tamin'ireo fiovàna nifandimby nisy tamin'ny fitondràna sy ny fanadinoan'ny mpitantana, marobe ireo mpifonja no adino tany, tsy nahalala akory na hisy farany na tsia ny sazin'izy ireo. Ity ny tantaran'izy ireo tao anatin'ny fanadihadian'i Régis Michel:
Tsy dia henjana loatra toy ny any Madagasikara ny zavamsiy ho an'ireo mpifonja ao Frantsa, kanefa fanontaniana marobe no tonga ao an-doha momba ny fitontongan'ny toepiainana. Tamin'ny 2012, toerana 57.408 ho anà mpifonja 67.373 notànana tao no nanànan'i Frantsa.
Fikambanana iray, Prison Insider, no maniry hipetraka mba hanangana fanarahamaso ny fomba fitànana am-ponja ao Frantsa sy manerana izao tontolo izao. Ao anatin'ny sehatra fanangonany vola, hazavain'ireo tomponandraikitr'ilay tetikasa ny fotokevitra ijoroan'ny hevitr'izy ireo sy ny anton'ilay hetsika :
Ny hamondronana ny angona rehetra momba ireo fonja manerana ny tany sy hametrahana azy ireny ho azon'ny maro kiraina no antom-pisian'ny tetikasa. Misy ny torohay saingy miparitaka any anaty tranonkala maro miresaka ny fonja. Mbola sarotra ny miditra aminà torohay iray natao ho an'ny daholobe sy amin'ny fiteniny. Misy filàna telo izay tian'ny Prison Insider hovaliana :
-filàna torohay-tolotra. Mba hahafantarana, ohatra, ny fomba hamangiana gadra iray ? Ahoana ny fomba hahafahana manome vola azy ?…
-filàna torohay-fanadihadiana. Mba hahalalàna ny toepiainan'ireo voafonja: firy isaky ny efitrano no isany ? misakafo araka ny tokony ho izy ve ry zareo?…
-filàna kianja ihetsehana. Mba hanairana na hijoroana ho vavolombelona momba izay zavatra iainan'ireo havany.
Endrika iray tsy fantatra loatra momba ny fahasarotan'ny fiainana any am-ponja no voafaritra amin'ny antsipirihany tamin'ny fanadihadian'ny fanarahamaso iraisampirena ny fonja :
Tsy misy afa-tsy iray no toerana tsy arahamaso ao am-ponja, ny toerana fanaovana firaisana ara-nofo : ny “unités de vie familiales” (UVF). Zo ny fahafahana miditra amin'ireny “unités” ireny, ho an'ny rehefa voafonja. Kanefa, 36 monja ireo toerana 188 famonjàna no manana izany. Samihafa anefa ny fomba fanaon'ireo mpiandraikitra ny fonja. Mitantara ny ramatoa iray mpiandraikitra fahiny fa ireo mpiambina amperinasa manatrika eo amin'ny efitrano natao hifampiresahana dia tsy maintsy « tena maniry izany mba hijery marina tokoa.” [..] misy ireo mpanaramaso no mba afaka mahatakatra, tsy manao fisafoana mandritry ny fifampiresahana ». Ny sasany misafidy ny tsy hiresaka : « Indray mandeha, nisy mpiambina nahita anay. Saingy tamin'ilay izaho efa miankanjo, tsy nahita na inona na inona izy. Fantany fotsiny. Avy eo izy lasa nandeha, tsy nisy ankoatra izay. Ny mpiambina sasany manakimpy maso refa fantany fa raharaha manokana ilay izy ». Miankina ihany koa amin'ny sitrapon'ireo mpiambina no ahafahana mahazo fotoana kely manokana ho an'ny tena.
Isanandro, mifandamina ihany koa ireo samy voafonja mba hikolokoloany ny filàny ara-nofo rehefa mifampizara efitrano. Ity ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpifonja iray :
Nisy fotoana, tao aminà efitrano nisy olona dimy aho, tena nifanizina. Nametraka fifandrindràna hafakely ireo mpiara-mifonja. Afaka mitazona ny efitrano ho azy manokana mandritry ny ora vitsivitsy ny mpifonja tsirairay. Hoy izy ireo tamiko : “ Tsy manaotao foana ianao ao an'efitrano ao, voaràra ny fanaovana filàna amin'ny alina, etc. Fa kosa, indray mandeha isankerinandro, avela irery ianao ary afaka manao izay tianao hatao, tsy misy te-hahalàla.”
Marobe ireo fikambanana manampy mba hanampiana ireo mpifonja amin'ny andavanandrony sy hanamoràna ny fiverenany anaty fiarahamonina. Ny Federasiona nasionalinìireo fikambanana mpandray ary mpamerina ho anaty fiarahamonina “Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS)” no manazava ao anaty torolàlana iray ireo hetsika efa nataony mba handrisihana ny famerenana ho anaty fiarahamonina sy hisorohana ny famerenankeloka :
Matetika loatra ny sazy ara-pitsaràna no arahana sazy ara-tsosialy koa ; tsy tokony ho fitaovana iray hameperana ara-tsosialy izy, amin'ny alàlan'ny fanilihana ho an-jorombàla ireo olona efa voaheloka. Ny sanda ho an'ny tsirairay sy ara-tsosialin'ny famonjàna nateraky ny fahatapahan'ny fifandraisana naterany (fahaverezan'ny asa, faharavan'ny fianakaviana, fahaverezan'ny toerana fonenana, ny tsy fahatafidirany ho anaty fiarahamonina) miohatra amin'izay vokatra nandrasana, dia indrisy fa lasa any amin'ny laharana faharoa ary mila tombanana tsara kokoa.